स्पेनको ‘टिकीटाका शैली’ फ्लप भएको हो ? - Himalkhabar.com
खेलकुदशुक्रबार, आषाढ ६, २०७१
स्पेनको ‘टिकीटाका शैली’ फ्लप भएको हो ?
“अहिले त हामीले जित्यौं, तर जब स्पेनको वर्चश्व शुरु हुन्छ, तब विश्व फूटबलमा उसको एकल वर्चश्व रहन्छ,” सन् २००६ को विश्वकप फूटबलअन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलमा स्पेनलाई २–१ गोलले हराएपछि फ्रान्सका भेट्रान जिनेदिन जिदानको भविष्यवाणीसहितको प्रतिक्रिया थियो । युरोकप एकपटक जित्नुबाहेक स्पेनको हातमा कुनै उपाधि नभएको बेला जिदानको यो भविष्यवाणी दुई वर्षपछिबाट मिलेको देखापर्न थाल्यो ।
स्पेनले सन् २००८ र सन् २०१२ युरोकप लगालग जित्यो । सन् २०१० मा विश्वकपको उपाधि उचाल्यो । दक्षिण अफ्रिकामा आयोजित त्यो विश्वकप जित्दै युरोपबाहिर विश्वकप जित्ने पहिलो युरोपियन देशको रुपमा इतिहास लेख्यो, स्पेनले । सन् २००६ पछि स्पेनले बनाएका रकेर्डको सूची निक्कै लामो छ ।
नोभेम्बर २००६ देखि जुन २००९ सम्म स्पेन अपराजित रहयो । ३५ खेलमा उसको त्यो अपराजित यात्रा फूटबल महाशक्ति ब्राजिलले बनाएको रेकर्ड बराबर थियो । त्यो रेकर्ड बनाउने क्रममा स्पेनले १५ खेल त लगालग जितेको थियो । त्यो रेकर्ड विश्व फूटबलमा नयाँ थियो ।
सन् २०१० को विश्वकप छनौटअन्तर्गतका १० खेलमै स्पेनले जीत दर्ता गर्‍यो ।
तर, ६ वर्षभन्दा बढी समय विश्व फूटबलमा जमाएको दबदबा सन् २०१३ मा आयोजित अन्तरमहादेशीय कपबाट तोडियो । ब्राजिलमा आयोजित प्रतियोगिताको फाइनलमा स्पेन बेमज्जाले हार्‍यो । ब्राजिलले उसलाई ३–० ले हार चखाएको थियो ।
तर, त्यो बेलासम्म पनि स्पेनको ‘नायकत्व’प्रति फूटबल विश्लेकहरुले चोर औलो उठाएनन् । उनीहरुले ब्राजिलको गृहमैदानमा स्पेन हार्नुलाई स्वभाविक भने । तर, ब्राजिलमा जारी विश्वकप फूटबलको नकआउट चरणबाटै घर फर्किने टिकट काटिसकेको छ, स्पेनले । नकआउट चरणमा नेदरल्याण्डससँग ५–१ ले लज्जास्पद हार व्यहोरेको स्पेनलाई चिलीले पनि २–० ले हार चखायो ।
त्योसँगै स्पेनले खेल्ने ‘टिकीटाका शैली’ असफल हुन थालेको टिप्पणी र बहस चर्को रुपमा भइरहेको छ । सन् २०१३ को अन्तरमहादेशीय कपको फाइनलमा ब्राजिलसँग हारेसँगै टिकीटाका शैली कमजोर भएको ठान्ने खेल पत्रकार निरञ्जन राजवंशी भन्छन्, “स्पेनले लगातार चार ठूला प्रतियोगितामा एउटै शैली (टिकीटाका) खेल्यो, तर त्यो शैलीको कमजोरी अरुले पत्ता लगाइसकेका थिए र ब्राजिलले त्यो शैली पहिलोचोटी तोडिदियो ।”
अर्कोतर्फ, अब स्पेनको वर्चश्व समाप्त भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । तर, नेपाली फूटबल टोलीका पूर्व कप्तान हरि खड्का स्पेनको वर्चश्व समाप्त नभएको तर्क गर्छन् । खड्का भन्छन्, “स्पेन होइन, उसको खेल्ने शैली ‘टिकीटाका’ मात्र फ्लप भएको हो ।’
“आफ्नो शैली परिवर्तन नगरेको र पुरानै खेलाडीको भरपर्दा स्पेन नराम्ररी हारेको हो,” उनको भनाइ छ । खड्काको तर्क छ, “स्पेनले पुरानै अनुहारमा मात्र विश्वास नगरेर नयाँ खेलाडीलाई पनि अवसर दिनुपर्थ्यो ।”
नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकतामा राखेर खेले फेरि पनि स्पेनकै वर्चश्व हुनसक्ने खड्काको विश्वास छ । तर, खेल पत्रकार राजवशी भन्छन्, “अब पनि त्यही शैलीमा खेलिरहे स्पेनको हारको कथा दोहोरिरहन्छ ।”